#BIM - Koorsada ETABS ee injineernimada Dhismaha - Heerka 1 - Geofumadas
Falanqaynta iyo naqshadaynta dhismayaasha - Heer zero oo heer sare ah.
Ujeeddada koorsada ayaa ah in la siiyo ka-qeybgalaha aasaaska iyo aaladaha horumarsan ee barnaamijka naqshadeynta, ma aha oo kaliya in la gaari doono Naqshadeynta walxaha dhismaha ee dhismaha, dhismaha ayaa sidoo kale la falanqayn doonaa iyadoo lagu saleynayo qorshayaasha faahfaahsan, iyadoo la adeegsanayo aaladda. ugu xoogga badan ee suuqa xagga horumarinta mashaariicda barnaamijyada kombuyutarka CSI ETABS Ultimate 17.0.1
Mashruucaan xisaabinta qaab-dhismeedka ee heerarka 8 ee loogu talagalay isticmaalka nooca guryeynta ayaa lagu fulin doonaa, iyada oo ay ku jiraan ku-daridda jaranjarada mooddada, wiishashka, iyo goynta derbiyada kuwaas oo ah diiradda ugu weyn ee koorsadan.
Xaashiyaha gudaha ee softiweerka ayaa si faahfaahsan loo sharixi doonaa CSI ETABS Ultimate 17.0.1. Waxay kuxirantahay qawaaniinta ACI 318-14. Waxyaabaha qaab dhismeed ee faahfaahsan (Goynta goynta) ayaa lagu gaari doonaa software AUTOCAD.
Waxay awoodi doonaan inay horumariyaan Mashruuc Dhismeyaasha Seism-ka u adkeysanaya ee ku yaal Goobaha La Jaray
Xoojinta faahfaahsan ee goynta derbiyada
Aqoonta aasaasiga ah gaar ahaan, ama markay arkeen koorsada: Gaar ahaaneed Injineeriyada Dhismaha leh ETABS 2016.2.0
Ardayda iyo Xirfadleyda xiiseeya injineernimada Dhismaha
Koorsadani sidoo kale waxaa lagu heli karaa Isbaanish
Post Previous«Previous Codsiga muraayada laser-ga ee 3D wuxuu ku guuleystaa abaalmarinta IFES
Post Next #BIM - Koorsada Mashruuca Dhismaha (Qaab dhismeedka + Robot + steel)Next »